Sysomos Gaze: Mufananidzo uye Vhidhiyo Kuongorora kweSocial Media | Martech Zone
Sysomos Gaze: Mufananidzo uye Vhidhiyo Kuongorora kweSocial Media
Chitatu, September 16, 2015 Chitatu, October 19, 2016 Douglas Karr
Iwe uri chiratidzo chenyika uye mutengi akabatwa anogovera mufananidzo unonyadzisa wechiratidzo chako pasocial media. Ivo havamaki iwe pane iyo pikicha, asi zvakangonaka zvakanyanya kuti usagovane. Inoenda pahutachiona uye usati wazviziva iwe, yako yekuzivisa chenjedzo iri kuenda sekutungamira masosi anotanga kutaura nezvako nekugovana iwo mufananidzo online.
Momentum yatotora kare uye nguva ndeyeiyo yakakosha, asi iwe wakanyanyisa kunonoka. Iwe uri munzira yekudzivirira. Iwe unoita chirevo, nekuzvininipisa kukumbira ruregerero, uye ita nepese paunogona napo kuzviita kumutengi.
Ko kana paine imwe nzira? Ko kana paine sevhisi yakaratidza logo yako mumufananidzo uye ndokuzivisa iwe-chaiyo nguva yechiitiko. Mukati mediki network iyo yainge yaona mufananidzo, ivo vanoona yako mhinduro mashoma laters. Pamwe unosundidzira pikicha kumashure nekukumbira ruregerero uye kudzoreredzwa. Kunyangwe isingamise chifananidzo kubva kuhutachiona, wese munhu anosarudza kunyora nezve chinokanganisa anogoverawo mhinduro yako.
Panzvimbo pekutaridzika semhando inotyisa iyo isina basa, iwe ikozvino unoita kunge mucherechedzo urikuteerera vatengi vako. Uku ndiko kubatsirwa kumashure Sysomos Gaze (kare Gazemetrics) - kupa mufananidzo uye vhidhiyo kuongorora kweyemagariro media, analytics, mushandirapamwe manejimendi uye kuburitsa.
Kugadzirisa mhando ine hutano hakudi kungoziva chete kuti ndiani arikutaura nezveako brand, chigadzirwa kana sevhisi - asiwo izvo zvinoonekwa zvavari kugovana nekuona. Sysomos Gaze inowana mifananidzo yechiratidzo chako munzira dzemagariro uye inodziunza pamwechete panzvimbo imwe.
Sysomos Gaze inobatsirawo manejimendi manejimendi manejimendi manejimendi, ichibvumira mabrands kubata nyore vashandisi vakatumira mifananidzo. Mhando dzinogona kukumbira mvumo yekutsikirazve mifananidzo inogadzirwa nevashandisi pamagero avo, ichishandura izvo zvemukati kuita zvinhu zvinoshandira zita.
Iwe unogona zvakare kuongorora mufananidzo nevhidhiyo zvinotaurwa nekufamba kwenguva neSysomos Gaze Analytics.
Sysomos ikambani yehungwaru hwemagariro inofambiswa nedata sainzi iyo inopa mabhizinesi mamiriro epakarepo kumazana emamiriyoni ehurukuro dzinoitika online mazuva ese Iyo Sysomos social intelligence chikuva inoenderera ichigadzirisa idzi hurukuro uye nhau nhau kupa vashambadziri mhinduro-yenguva-nguva pamusoro peizvo vatengi vavo vanofunga uye kunzwa.
Tsvaga uye curate chaiye hutachiona hwevatengi hwemagariro mifananidzo uye mavhidhiyo kubva kune vatengi mune imwechete maonero.
Shandura mvumo yekukumbira kufambiswa kwemabasa kugonesa vashambadzi kuunganidza nyore nyore mvumo kubva kune vatengi kuti vashandise mifananidzo yavo uye mavhidhiyo mumakambani avo ekutengesa
Anotaridzika anovaka zvemukati anovaka nema Smartlists: Vatengesi vanogona kuvaka kuunganidzwa kwemifananidzo zvichibva pazvinhu zvinoonekwa nekusarudza seti yemifananidzo ine zvinhu izvo mushambadzi ari kutarisa kuti aongorore kana kupeta.
Wongorora uye ita neve Instagram neTwitter vanokurudzira, kuwana ruzivo muhunhu hwavo hwakasarudzika, hupfumi uye zviitiko
Kupfuura 1500 mabhenji uye vamiririri, kusanganisira makumi masere muzana yemakoshesesa epasi rose akakosheswa, sezvakarongwa neInterbrand, vimba neSysomos kunehungwaru hwavo. Sysomos ine mahofisi mumaguta manomwe pasi rese, kusanganisira London, New York, San Francisco neToronto.
Tags: chitupa chiratidzobrand yekutarisagirazimufananidzo chenjedzokuongorora zvemifananidzologo kuzivikanwamagariro enhausysomossysomos tarisamavhidhiyo ekuzivisavideo monitoring